Ahoana ny famonoana ny checker amin'ny Android | Androidsis
Amin'ity lahatsoratra manaraka ity, ho toy ny fampianarana fototra natao manokana ho an'ireo mpampiasa Android vaovao, dia hasehoko anao ny fomba alefaso ny checker amin'ny Android, dingana iray izay, na dia amin'ny fahitana azy aza dia toa tena tsotra, ho an'ity kilasin'ny mpampiasa Android vao manomboka ity, dia mety ho somary sarotra ny mivezivezy eo anelanelan'ny toerana maro izay ananan'ny rafitry ny fikirakiran'i Andy.
Fantatrao izao, raha a mpampiasa vao nanomboka tamin'ny Android o nifindra monina avy amin'ny rafitra miasa hafa toy ny Windows Phone, iOS, Blackberry, Symbian na inona na inona ny rafitra fiasa niavinao, azo antoka fa natao ho anao manokana ity fampianarana azo ampiharina ity.
1 Inona ilay checker Android?
2 Ahoana ny fomba ahafahana mampandeha ny checker amin'ny Android
Inona ilay checker Android?
Hanombohana dia tokony ho fantatrao izany ny mpanamarina amin'ny Android Izy io dia ilay rafitra tafiditra ao anatin'ny fikirakiran'ny Android misy antsika amin'ny fotoana iray izay matetika tafiditra ao anaty kitendry samihafa izay ananantsika hampiasaina sy hifaliana ao amin'ny terminal-nay. Ao anatin'izany ny kitendry fananganana marika Android toa ny Samsung, Sony, LG, HTC, sns, sns.
Toy ny lojika, ity fampianarana ity dia hitari-dàlana anao ho an'ny android keyboard izay tafiditra ao amin'ny ankamaroan'ny terminal eo amin'ny tsena ankehitriny, na dia manan-kery ho an'ny karazana klavier aza izy io, mitahiry ny tsy fitoviana mety ho hitantsika ao anatin'ny sehatr'izy ireo manokana.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny manokatra ny vatasarihana fampiharana an'ny Android ary ampidiro ny kisary Toe-javatra.
Raha vao tsindrio ny Settings dia tsy maintsy hidina isika mandra-pahitantsika ny safidy Fampidirana fiteny sy lahatsoratra.
raha vantany vao tonga, dia ho hitantsika ny safidy génétique voalohany mamaly ny anaran'ny Fanamarihana tsipelina, Amin'ny alàlan'ny fanamarinana ny boaty mifandraika dia hampandehaninay izany. Raha tsy hampandeha azy dia esory fotsiny ilay izy.
Manaraka ao anatin'ny sehatry ny fampidirana fiteny sy lahatsoratra dia ho hitantsika ihany koa ny fikirakiraky ny kitendry samihafa napetrakay amin'ny Android -ntsika, amin'ny alàlan'ny fanindriana ny kisary izay asehoko anao amin'ny sary mifatotra, hiditra ny toerana misy ny kitendry tsirairay avy izahay izay afaka ataontsika mandamina kokoa ny fanamarinana Android checker.
Ohatra, ao amin'ny sehatry ny fitendry Android dia afaka mahita safidy antsoina isika Fanitsiana fiara avy amin'ny alàlan'ny fipihana eo aminy isika dia afaka manodinkodina ny haavon'ny fanitsiana ny fitendry izay afaka mifidy eo anelanelan'ny safidy an'ny No, ampahany, Total y Saika tanteraka.
Tsy maintsy hizaha toetra ireo safidy ireo isika mba hahitana hoe iza no safidy tsara indrindra amin'ny fomba fanoratanay manokana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Ahoana ny fomba ahafahana mampandeha ny checker amin'ny Android
Salama Francisco Ruiz:
Manana Sony Xperia Z3 Compact aho.
Nanana olana tamin'ny "Spell Checker" tao amin'ny mailako Gmail aho.
Hatramin'izao, dia niasa tanteraka tamin'ny fanoritsoritana, miaraka amin'ny tsipika mahitsy mena, ireo teny tsy misy tsipelina izay, rehefa manindry azy ireo, dia misy tolo-kevitra maromaro hisafidianana.
Ankehitriny, tavela miaraka amina tsipika mena mikitroka sy mahia kokoa izay rehefa manindry dia tsy mampiseho na inona na inona.
Raha ny fanoratana WhatsApp dia mandeha tsara.
Inona no tokony hataoko mba hamerenana amin'ny laoniny ity fampiasana ity ao amin'ny Gmail?
Salama ary raha tsy mahazo autocorrection aho dia ahoana no ananako marika Android xgody
Piston 3.0, ny headphone Xiaomi vaovao